Dowladda Spain Oo Ka Dalbatay Hoggaamiyaha Catalonia Inuu Xaqiijiyo Ku Dhawaaqidda Madaxbanaanida Catalonia | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Dowladda Spain Oo Ka Dalbatay Hoggaamiyaha Catalonia Inuu Xaqiijiyo Ku Dhawaaqidda Madaxbanaanida Catalonia
Spain(OWN)- War ka soo baxay Ra’iisul Wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa lagu sheegay in uu u qabtay muddo shan maalmood gudahooda hoggaamiyaha Catalonia in uu ku kala caddeeyo in uu ku dhawaaqay madaxbanaani iyo in kale.
Waxaa sido kale Xukuumadda Madrid ay sheegtay in Haddii hoggaamiyaha Catalonia Carles Puigdemont uu xaqiijiyo ilaa isniinta in uu ku dhawaaqay madaxbanaani iyo in kale ayaa waxa hadana la siinayaa muddo seddex maalmood ah oo uu kaga noqdo shaacinta Go’aankaasi.
Dowladda Spain ayaa Hadddii hogaamiyaha Catalonia uu ku guuldaraysto arintaasi waxa ay xukuumadda,Madrid laali doontaa qodobka 155 ee dastuurka taasi oo fursad u siinaysa in ay hakiso ismaamul hoosaadka gobolka Catalonia waxaana toos u maamulaysa dowladda dhexe.
Talaabadan ayaa waxaa ay dhalisay walaac siyaasadeed oo kataagan Dalka Spain,iyadoo wamada Yurub ay u muuqdaan in ay qorsha gooni isu taaga ah ay ka soo horjeedaan , Hogaamiyaha Catalonia ayaa Talaadadii saxiixay ku dhawaaqida madaxbanaanida gobolkaasi Catalonia.
Balse maamulka dowlada Catalonia waxay hakiyeen dhaqangalinta madaxbanaanida si fursad loo siiyo wadahadal ay la galaan xukuumadda Madrid.
Maxkamada dastuuriga ee dalka Spain ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay aftida,Sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Catalonia boqolkiiba 90 ka mid ah dadkii codadkooda dhiibtay waxay taageereen aftida madaxbanaanida.